CIA-da oo sheegtey in goor dhaw la soo deyn doono sawirka dhimashada Bin Ladin – SBC
CIA-da oo sheegtey in goor dhaw la soo deyn doono sawirka dhimashada Bin Ladin
Posted by editor on May 4, 2011 Comments
Laanta sirdoonka Mareykanka u qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo CIA ayaa shaaca ka qaaday in si deg deg ah loo soo deyn doono hal sawir oo ku saabsan dhimashada Osama Bin Ladin oo Mareykanku ay sheegeen inay ku dileen wadanka Pakistaan.
Agaasimaha CIA-da Leon Panetta, ayaa daboolka ka qaaday go’aanka sii deynta sawirka Bin Ladin kaasi oo muran uu ka aloosnaa sida ay sheegayaan ilo wareed oo lagu kalsoon yahay.
CIA-da Mareykanku waxay sheegtey in sawirkan siideyntiisa ay hada tashi ka leeyihiin saraakiisha aqalka Cad, iyadoo la doonayo in siidenynta sawirkan lagu qajiiyo dilka Osama oo dadka qaarkiis ayka muujiyeen shaki maadama aan wali la heyn sawir ama cadeyn muujinaysa.
Goor sii horeysay Madaxweyne Obama ayaa la sheegay in uu diiday baahinta sawirada dilka Bin Ladin isagoo sheegay in sawiradu yihiin kuwa dhiig badan uu ka muuqdo wajiga Bin Ladin isla markaana dhaawac xabadeed oo weyn uu kaga yaal wajiga dhanka bidix, waxaana uu sheegay in taasi ay keeni karto caro ka timaada Muslimiinta Dunida.
Agaasimaha CIA-da Leon Panetta, oo wareysi siiyey Tv-ga NBC ayaa sheegay in laga sugayo madaxweyne Obama fasaxa siideynta sawirka dhimashada Bin Ladin qajiinaya waxaase uu meesha ka saaray wax shaki ah oo ku gadaaman geerida Bin Ladin, isagoo sheegay in hayaan sadex darisn oo sawiro ah oo dhamaantood la qaaday xiligii la dilayey Osama Bin Ladin.